Xildhibaan ku geeriyooday Muqdisho iyo KGS oo ka tacsiyeysay – Kalfadhi
Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), oo lagu magacaabo Kheyre Maxamed Axmed, ayaa maanta ku geeriyooday Muqdisho. Xildhibaanku waxa uu waqtiyadii dambe ku xanuunsanaa caasimada dalka, waxaana lagula tacaalayey isbitaal ku yaala Muqdisho.
Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ayaa geeridiisa ka tacsiyeysay. Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen, ayaa sheegay iney Marxuumka Illaahey uga baryayaan naxariis iyo Janno.
Dowlad Goboleedka KGS, gaar ahaan Golaha Wakiilada Maamulka uu ka tisanaa ma sheegin nuuca xanuunka uu Xildhibaanku u geeriyooday iyo sida uu ahaa ka warqabkooda intuu xanuunsanaa.